मगर समुदायमा चेली तथा पितृ पुज्ने प्रचलनका रुपमा माघे सक्रान्ति ! – ebaglung.com
मगर समुदायमा चेली तथा पितृ पुज्ने प्रचलनका रुपमा माघे सक्रान्ति !
२०७४ माघ ३, बुधबार १७:०६	Footer Slider, Top News, अन्य समाचार, विविध
***लेखिका पत्रकार हुन् ।
मिति २०७४ माघ ३ गते,
नेपाल मगर संघका केन्द्रिय अध्यक्ष नविन रोकामगर,डा.मिन श्रीसमगर
जम्मदिनको अवसरमा उपाध्यक्ष घर्तीले दिए रामानुज आश्रममा खाद्य सामग्री !
स्वास्थ्य स्वयम् सेविका तालीम सम्पन्न, सिकेको ज्ञानलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रतिवद्धता !